Akwụkwọ Matt Dyer na Martech Zone |
Edemede site na Matt Dyer kwuru
Matt Dyer kwuru
Matt Dyer bụ onye isi ahịa na ire ahịa na Zilliqa, ebe ọ ga-arụ ọrụ gafee ngalaba Teknụzụ Azụmaahịa na Ahịa iji banye n'ụgbọ ahịa ndị ọzọ na ọrụ Zilliqa's BaaS. Matt na-eweta ihe karịrị afọ 18 nke ọkachamara ụlọ ọrụ site na ahịa na echiche ahịa na-aga ahịa.
Gafee ihuenyo: Otu Blockchain Ga-esi metụta Azụmaahịa Mgbasa
Saturday, April 10, 2021 Saturday, April 10, 2021 Matt Dyer kwuru
Mgbe Tim Berners-Lee mepụtara Web Wide Web n'ime afọ iri atọ gara aga, ọ nweghị ike ibu ụzọ hụ na wouldntanetị ga-aghọ ihe ọ bụla dị na ya taa, na-agbanwe agbanwe n'ụzọ ụwa si arụ ọrụ n'akụkụ niile nke ndụ. Tupu Intanet, ụmụaka chọrọ ịbụ ndị na-agụ kpakpando ma ọ bụ ndị dọkịta, na aha ọrụ nke onye na-emetụta ihe ma ọ bụ onye mepụtara ọdịnaya adịghị adị. Ọganihu ngwa ngwa ruo taa na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 30 pasent nke ụmụaka dị afọ asatọ ruo afọ iri na abụọ
Pọdkastị kacha ọhụrụ anyị